Tarkaanfiin koree giddu galeessaa ABUT maal hima? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright TPLFofficial1967/Facebook
Koreen giddu galeessaa Adda Bilisa baasaa Uummata Tigiraay (ABUT) walgahii idilee isaa baatilee lamaa ol itti fudhate xumuree jira.
Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dura taa'aa, Aadde Fatilewarq Gebregziyabeer ammoo dura teessuu itti aantu gochuun yoo filatu, miseensota koree hoji raawwachiiftuu haaraas filatee jira.
Dhaabichi walgahii kanarratti ilaalchi farra diimokiraasii akka keessatti dagaagee, dargaggeessa barate ofitti siqsuu dhabuufi miseensotni walirratti duuluu akka hanqinaatti qoratuu isaa ibsa torbee darbe baaseen beeksisee jira.
Qorannicha boodas Obbo Abbaay Walduu fi miseensa koree hoji raawwachiiftuu Obbo Bayyene Mikruu koree hoji raawwachiiftuu keessaa gadi buusee miseensa koree giddu galeessaa ta'anii akka itti fufan, miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan turan aadde Azeeb Masfin ammo koree giddu galeessaa keessaa akka ittifaman murteessee jira.
Kana malees miseensota biro lama maqaan isaanii hin eeramneef akeekkachisa kennee jira.
Itoophiyaa keessatti rakkoon siyaasaa waggoota lama dura uumame akka furmaata argatuuf, ADWUI'n jijjiirama siyaasaafi fooyya'insa tarsiimoo akka taasisu waamicha gochaa kan turan Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Ababbaa Takilahaayimaanot, tarkaanfiin amma dhaabichi fudhate waggoota lama dura kan fudhatamuun irra ture 'tarkaanfii barfatedha' jedhu.
Pireezidantii naannoo Tigraay kan turanifi adda bahuumsa A.L.I bara 1993 dhaabicha keessa tureen kan ari'ataman Obbo Gabruu Asiraat, "Tarkaanfiin amma dhaabichi fudhate wal injifachuu garee deeggartootafi mormitoota Ministira Muummee duraanii obbo Mallas Zeenawii malee dhaabichi jijjiiramuu hin mul'isu, fedhiifi gaaffii uummataa kan bu'urreffates miti," jechuun BBC'tti himaniiru.
"Morkii aangoo malee ajandaan biyyaafi uummata fayyadu irratti hin kaanes," jedhu.
Dhaabichi garam adeemaa jira?
Kan barfate ta'us, dhaabichi akkuma jedhe yoo of haaromse rakkoo walxaxaa biyya kanaaf furmaata laachuu danda'a jedhu Jeneraal Abbabaan.
Kana gochuuf ammo "dargaggoota ciccimoo yaada haaraa fi gahumsa qaban gara hoggansaatti fiduu qabu," jedhu.
"Gareen injifate, hanga caasaa gadiitti injifannoo isaa cimsee itti fufsiisuu malee kallattiin jijjiiramaa natti hin mul'atu, inumaa dhaabichas ta'e biyyattii gara kufaatii caalutti waan geessu natti fakkaata," kan jedhan ammo Obboo Gabruudha.
Pireezidantiin itti aanaa Yuunivarsiitii Addigiraat Dr. Alam Mabraatuu garuu tarkaanfiin fudhatame kun dhaabicha keessatti fooyya'iinsa gaarii fida jedhu.
Tarkaanfiin fudhatames, wal haleeluu osoo hin taane wal gamaggamuun kallattii fuulduraa sirreeffachuudha jedhu.
Dargaggootni gahumsa hoggansaa cimaa qaban ammayyuu dhaabicha keessa jiru kan jedhan Dr. Alam, dargaggeessi of gahoomsee aangootti dhufuu qaba malee hanga itti kennamuutti eeguu hin qabu jedhu.